Yoy took @@@ — Steemkr
Yoy took @@@
ကျွန်မကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်သောအခါအကြှနျုပျအားပွောဆိုသည့်အမ်မလီ Dickinson ကဗျာတစ်ပုဒ်အကြောင်းကိုစာဖြင့်ရေးသားပါတယ်: "ငါဘယ်သူမှပေါ့! သင်သည်အဘယ်သူနည်း / နငျသညျ-ဘယ်သူမှ-လည်း? မတ်ေတာသညျ (III ကို) "ငါမှတ်မိပထမဦးဆုံးကဗျာတစ်ပုဒ်ဂျော့ချ်ဟားဘတ်ရဲ့ခဲ့ပါတယ်" ။ "ဒါဟာထိုက်တန် feeling နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဟုအကြောင်းကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့အဘယ်သူမျှမမျှ, သင်တို့ကိုငါအစေခံပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်သူ၏သက်တမ်းသင်တစ်ဦးမော်ဒယ်လ်အဖြစ်သုံးစွဲဖို့လိုခငျြတဲ့အထူးသဖြင့်ကဗျာဆရာဆုရှင်ရှိခဲ့ကြပြီလော Rita ချိုးငှက်ဝါရှင်တန်, D.C. အတွက်အများပြည်သူဖတ်တွေအများကြီး ပေး. , အတွင်းကျယ်ပြန့်အများပြည်သူဆောင်ခဲ့။ , ငါစိတ်ကူးကိုချစ်၏။
ငါသည်လည်းရောဘတ် Pinsky ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကဗျာစီမံကိန်းကိုချစ်၏။ "ငါသည်ကဗျာအကြောင်းအများကြီးမသိရပါဘူးအိုး," ဟုပြောသူကိုလူတွေတောင်မှသူတို့သယ်တဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ပါဘူး။ သငျသညျသယ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကဗျာကိုရှိပါသလား? သူတို့ကိုငါအများကြီးရှိသည်။
55 အသစ်ရဲ့စာအုပ်, ရေအတွက် Wade အတွက်ကဗျာအချို့ကိုပြည်တွင်းစစ်ကြီးအကြောင်းကိုဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ယခုအကြောင်းရေးဖို့? ကျနော်တို့ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေ, ကြှနျုပျတို့သညျအမှနျတကယျလကျခံဖို့အတွက်စေ့စပ်ခံရဖို့ပုံရသည်သောရုန်းကန်လျက်နှင့်မယ့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသည်းခံပေမယ့်တန်ဖိုးကိုထင်, လမ်းခရီးတရှောက်လုံးကိုပြန်သောအခြိနျကာလကိုသွားကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။ အဘယ်ကြောင့်နိုင်ငံရေးတုံ့ပြန်ကြောင်းကဗျာရေးဖို့? ငါလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်, သင်၏မာနထောင်လွှားနေတဲ့အမြင်, သငျသညျရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများနှင့်အတူညစာပါတီမှာထွက် trot မယ်လို့အရာမျိုးရှိသည်ဖို့လုံလောကျရဲ့သည်ဟုမထင်ကြဘူး။ ကျနော်တို့သူအပေါငျးတို့အမှုအရာများကိုသိပေမယ့်ကိုယ့်ကျွန်တော်တို့ထက်ကျော်လွန်ရဖို့ကိုယျ့ကိုယျကိုဖိအားပေးဖို့ရှိသည်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးလွယ်ကူပါတယ်, တဦးတည်းတဖက်သတ်အဖြေကိုစိတ်ကျေနပ်မှုမရင့်သောကြောင့်, အနုပညာ, ထိုအကျင့်ကိုကျင့်၏ကောင်းတစ်ဦးလမ်းဖြစ်၏ ဒါဟာဆိုးကျိုးများတဲ့ဝိရောဓိထွက်ရှာတတ်၏။ သင်တို့အဘို့အလာမယ့်ကဘာလဲ? ငါရီလဲ့လို့ချေါတဲ့ခေတ်ပြိုင်တရုတ်ကဗျာဆရာ Co-ဘာသာပြန်ဆိုတာပါ။ ငါမြေပေါ်တွင်ကျွန်ခံရကြ၏သူတွေကို၏သားစဉ်မြေးဆက်နေဖြင့်ကျင်းပမြေယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့, Greg Spears နဲ့အော်ပရာတစ်ခု libretto အလုပ်လုပ်တယ်, ထိုပြည်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်လာသည့်အခါအဘယ်အရာကိုတွေ့ကြုံတတ်၏။